Ithegi: Amacwecwe | Martech Zone
Ubume beSelfowuni eMelika
NgoLwesibini, Matshi 11, 2014 NgoLwesihlanu, Matshi 14, 2014 Douglas Karr
Ukusetyenziswa kwefowuni phakathi kwabathengi kuyaqhubeka nokunyuka. I-74% yokukhula yayikwi-smartphones ene-79% yabathengi base-US abakhangela kunye nokuthenga kwiindawo kunye neeapps. Ngo-2016 imali engenayo yesoftware iya kubetha i-46 yezigidigidi zeedola. Ukulinganisa ukuba olu tshintsho lukhulu luthetha ntoni kwimveliso abantu base-Usablenet badibanisa i-infographic ebonisa ukuba kungakanani ukusetyenziswa kwe-Intanethi okutshintsha indlela abathengi abanxibelelana ngayo neempawu kwiwebhu. I-Usablenet inika amandla iisayithi ezihambayo kunye
Imakethi yentengiso eshukumayo yahlulwe kunanini na ngaphambili, kwaye ngokuhamba kwexesha, inokuqhekeka ngakumbi. Uphando lwamva nje olwenziwe yi-comScore Inc. egubungela ikota yokugqibela ka-2012 ityhila ukuba i-Android igcine indawo yayo njengeyona OS ithandwayo kwindawo ehambayo. I-53.4% ​​yezixhobo eziphathwayo ngoku zisebenza kwi-Android OS, kwaye oku kubonisa ukunyuka kwe-0.9% ukusuka kwikota edlulileyo. Amandla e-Apple iOS angama-36.3% kuzo zonke izixhobo eziselfowuni, kodwa ubonile ifayile ye-
Akukho mathandabuzo ngayo. Ngakumbi nangakumbi abasebenzisi bathenga iitafile kwaye bazisebenzisa kwi-e-commerce ngenxa yokubonelela okubonelelweyo. Ingxelo yakutshanje evela eMarketer iyakuqinisekisa oku kwaye ichaza ukunyuka kwentengiso yeethebhulethi, ukuguqula urhwebo lwe-m-yorhwebo lube lushishino lweedola ezingama-50 ezigidi kunyaka olandelayo. Inkcitho yorhwebo iyonke, kubandakanya iipilisi kunye nee-smartphones, ngo-2012 yayiyi-24.66 yezigidigidi zeedola, kwaye eli nani lalimele ukunyuka ngama-81% ukusuka kumanani ka-2011. Kulungile
Ngayo yonke itekhnoloji ekhoyo ngoku, umxholo uyasetyenziswa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo nakwizixhobo ezininzi ezahlukeneyo. Ngelixa iidesktops kunye neetafile zibadlala kakhulu kumdlalo, izixhobo eziphathwayo zibonakala zinempembelelo enkulu kunqakrazo ngamaxabiso kunye nokukhangela. Ngo-2013, ukuthengiswa komxholo weselula kuya kuvelisa imbuyekezo enkulu kutyalo-mali ukuba lwenziwe kakuhle. Siqokelele uphando kumthengi weqonga labhlogi weqonga, isiQinisekiso, kunye nomthengi wesoftware yokuthengisa,